आफ्नै साथिले दिउँसो भोज खुवायो, साँझ ज्या'न खा'यो -
रौतहट: रौतहटको गरुडाका भएको युवकको ह’त्या आफनै साथीहरुले गरेको खुलेको छ। ह त्याको आ’रोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले बिहीबार ७ जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। गत साउन ३१ गते राति रौतहटको गरुडा नगरपालिका वाड नं. ८ जिगडियाका नन्दलाल रामको २० वर्षीय छोरा निरन्जन राम चमारको घा’टीमा धा’रिलो ह’तियार प्रयोग गरेर ह त्या गरिएको थियो।
युवकको ह त्याको आ’रोपमा सोही गाउँका शेख गुलाबीका छोरा आजाद, मनोहर महराका छोरा अजय कुमार रञ्जन, शशि भुषण यादवका छोरा विवेक राय यादव मंगल रामको छोरा अर्जुन राम, हितलाल पासवानको छोरो सिकिन्द्र पासवान, पनिलाल महराको छोरा विजय महरालाई प्रहरीले प क्राउ गरेको छ।
प क्राउ परेका सबै मृ’तक चमारका साथी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतोले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। साथीहरु मिली निज निरञ्जन रामलाई मा र्ने योजना बनाई योजना अनुसार ३१ गते शनिबारको दिन भोज गरिएको थियो। भोजमा निरञ्जन रामलाई अत्याधिक रक्सी खुवाई मताइ वा’दवि’वाद गरी पूर्व योजना अनुसार सबै साथीहरु मिली निरञ्जन रामलाई ब’न्धक बनाइ ह त्या गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक महतोले बताए।
मृ’तक चमार र प्रतिवादी शेख अजादको पारिवारिक वि’वादको कारण निज समेतको योजनामा निज निरञ्जन रामलाई फोनबाट बोलाई पार्टी खुवाई घाँ’टी रे’टी कर्तब्य गरी मा’रेको अनुसन्धानबाट खुलेको डिएसपी महतोले बताए।
प्रतिवा’दीहरुहरुलाई ज्या’न सम्बन्धी क’सुरमा मिति गत भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी जिल्ला अदालत गौरबाट म्याद थप भई न्यायिक हि’रासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य भई रहेको उनले बताए।
को’रोनाबाट बच्न कस्तो मास्क रोज्ने ?
मास्कको सही प्रयोग गर्ने तरिका सहित काठमाडौ । को’राेना भाइरस स’ङक्र’मणबाट बच्न मास्कको प्रयोग बढेपछि बजारमा यसको अ’भाव सुरु भएको छ । भारतले मास्कको निर्यात रोकेसँगै अ’भाव बढेको हो । भा’इरसको म’हामा’री बढ्दैै गएपछि सावधानी अपनाउन मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले माग बढेको छ । सर्जिकल मास्क वा मेडिकल मास्कले कि’टाणु रोक्छ भन्दै डाक्टरले लगाउन सुझाव दिएका छन् । तर कतिपयलाई कसरी लगाउने, कस्तो मास्कले काम गर्छ, कुन खालको मास्क लगाउनेजस्ता विषय राम्ररी थाहा छैन ।
अहिले बजारमा धेरैखालको मास्क पाइन्छ । त्यसमध्ये सर्जिकल मास्क आमनागरिकले धेरै प्रयोग हुने गरेका छन् । कपडाको मास्कले राम्ररी काम गर्दैन । त्यसैले सर्जिकल मास्कको प्रयोग बढेको छ । अर्काे, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको एन नाइन्टिफाइब मास्क ९५ प्रतिशतसम्म कि’टाणु रोक्ने भएकाले यसलाई एन नाइन्टिफाइभ भनिएको हो । यस मास्कको बनोट र काम पनि फरक किसिमको छ ।
यदि कुनै व्यक्तिलाई स’ङ्क्रमण भएको छ र रुघाखोकी वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रो’ग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छ्यु गर्दा, बोल्दा निस्किने सानासाना कणलाई रोक्ने काम यो मास्कले गर्छ । मेडिकल मास्कको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको एउटा बि’रामी मान्छेबाट अर्कोमा यसले स’ङ्क्रमण सर्नबाट रोक्छ ।
‘एन नाइन्टिफाइभ’ जस्तो मेडिकल मास्क प्रभावकारी छैन, तर राम्रोसँग लगायो भने यसले ७० देखि ८० प्रतिशत कि’टाणुलाई सर्नबाट रोक्छ । यसको प्रयोग गर्दा ठूलो खालको मास्क लगाउनु हुँदैन । यसले दुबैतिरबाट कि’टाणु छि’र्न सक्ने हुन्छ । त्यसैले आफूलाई उपयुक्त हुने मास्कको प्रयोगा गर्नुपर्छ । बि’रामी भेट्न जानुपर्ने भयो भने भेट्न जाने व्यक्तिले मास्क लगाउनै पर्दछ । फेरि अर्काे बि’रामी भेट्न जानुपर्दा मास्क फेर्नु पर्दछ । मेडिकल मास्क बि’रामीले लगायो भने रो’ग अरुलाई सर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
मेडिकल मास्कमा तीन वटा तह हुन्छ । सबै तहले गर्ने काम फरक फरक हुन्छ ।सबैभन्दा बाहिरको तहमा पानी र थुक टाँसिदैन त्यसलाई रिपेल गर्छ ।बीचमा रहने तहलाई फिल्टर भनिन्छ, यसमा सानासाना जीवाणु र भा’रसलाई फिल्टर गर्ने क्षमता हुन्छ ।भित्रको तहलाई हाइडोफिलिक तह भनिन्छ, यसले लगाएको व्यक्तिले खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, बोल्दा निस्किने थोपा वा कणहरुलाई रोक्ने गर्छ ।यसले प्रदुषणलाई भने रोक्न सक्दैन ।सकेसम्म एन नाइन्टिफाइभ मास्क लगाउनुपर्छ । तर सामान्य अवस्थामा सर्वसाधारणले मेडिकल मास्क लगाउँदा पनि हुन्छ ।तर स’ङ्क्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बस्ने व्यक्ति छ भने उसले एन नाइन्टिफाइभ मास्क पूरै उपयुक्त तरिकाले लगाउनुपर्छ ।